Lasibatry ny finoanoam-poana ny sola loha, hoy ny polisy ao Mozambika · Global Voices teny Malagasy
Mitàna finoanoam-poana fa misy volamena ny lohan'ny olona sola .
Voadika ny 27 Desambra 2019 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, English, Español, नेपाली, Português
Tamin'ny fiandohan'ny volana Jona 2017 dia lehilahy telo no nisy namono tany amin'ny distrikan'i Milange, kilaometatra vitsivitsy miala ny sisintany Malaoita. Hita fa notapahan-doha ny iray tamin'ireo niharam-boina ary nesorina ny ampahany tamin'ireo taovany. Lehilahy roa no voasambotra ary niaiky avy eo fa mpitsabo amin'ny ody any Tanzania sy Malawi no mila ireo taova ireo.
Noho ny finoanoam-poana tany an-toerana no antony nahatonga ny famonoana izay nitana ny fiheverana fa misy volamena na afaka mampanan-karena ny lohan'ny lehilahy sola, hoy ny mpitondratenin'ny polisy iray tao Zambézia tamin'ny BBC. Voalohany tamin'io ny lehilahy sola no lasibatry ny resaka fanafihana tany Mozambika.
Saingy nisy tranga hafa niseho tao amin'ny firenena izay nahitana tatitra manokana momba ny famonoana vokatry ny ody maizina, izay niantraika manokana tamin'ny ireo olona bobo. Nanjary nahatsiravina tokoa ny raharaha ka voatery nanatanteraka iraka ny Firenena Mikambana tamin'ny taona 2016 hanadihady ilay fomba fanao tany amin'ireo firenena afrikana Atsimo Atsinanana vitsivitsy.
Nisy tatitra mikasika ny fanenjehana ireo olona bobo ihany koa tany amin'ny firenena hafa tany Atsimon'i Afrika, indrindra tany amin'ny manodidina an'i Tanzania, izay nanatontosain'ny governemanta fanentanana mba hiadiana amin'ny finoanoam-poana sy ny hevi-draikitra ary ny fisamborana ireo olona noahiahiana.
Nampitandrina ireo izay nikasa handeha ho any an-toerana i Ukombe Weya, mponina ao an-tanàndehiben'i Maputo.
Nilaza i Hussene Algy Adamo, mpianatra monina ao an-tanàndehiben'i Inhambane, any atsimon'i Mozambika, fa efa mijery ity raharaha ity ny polisy any an-toerana:
Nizara tao amin'ny Facebook ny tatitra nataon'ny bilaogera Armen Snaippa i Angela Ferreira Samantha, izay nanolo-kevitra fa tafiditra ao anatin'ireo fanamby ara-tsosialy lehibe miantraika amin'i Mozambika ilay olana: